ဗိုင်းရပ်စ်စတင်ရာ ၀ူဟန်ကနေ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသူတစ်ဦးရဲ့ “ရင်ဘတ်နဲ့ရေးတဲ့စာ” – GuGuGarGar
Shwe | February 2, 2020 | Knowledge | No Comments
အခြေနေတွေ ကတော့ အားလုံးသိပြီးကြမှာပါ။ အစကနေ မပြောတော့ပါဘူး။ အခု ခံစားချက်ကိုပြောရရင် ဟိုကိုပြန်မသွားချင်တော့ဘူး။ တက္ကသိုလ်တွေတက်တုန်းက ကျောင်းပိတ်လို့ အိမ်ပြန်ရင် ကျောင်းမပြန်သွားချင်တာမျိုးပေါ့။
မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသူတစ်ဦး ရေးထားသော “ရင်ဘတ်နဲ့ရေးတဲ့စာ”
အစက ဖြစ်ခါစက ချောက်ချားခဲ့တယ်။ တုန်လှုပ်ခဲ့တယ်။ သေမှာကြောက်လို့မဟုတ်ဘူး။ အဲ သေမှာကြောက်လို့ဆိုဦးတော့… မီဒီယာထက်က စကားလုံးတွေ၊ပို့စ်တွေ(မမှန်ပေမယ့်)က အဖော်မဲ့စေခဲ့တယ်။ နာကျင်စေခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်က ဖေးမမှုကိုမျှော်လင့်ခဲ့တာ။ စာနာမှုကို တောင့်တခဲ့တာ။
ပြန်လာရမယ့်နေ့မှာ အဆောင်ကထွက်တော့ ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်။ Congratulations လုပ်ကြတယ်။ ကျေးဇူးလို့ ပြန်ပြောရတာ ဒီတစ်ခါ အရသာအရှိဆုံးပဲ။မပြန်ရသူတွေအတွက် စိတ်မကောင်းပေမယ့် သူတို့တွေရှေ့မှာ ခေါင်းကိုမော့၊ ရင်ကိုကော့ပြီးအထုပ်ဆွဲပြီးထွက်လာလိုက်တယ်။ (အရပ်တောင် ၆ပေလောက်ထိရှည်သွားတယ်)ငါးထပ်ကနေ အောက်ကို ဘယ်လိုရောက်သွားမှန်းမသိလိုက်ဘူး။
ဝူဟန်လေဆိပ်မှာ စစ်စရာရှိတာစစ်ပြီး ထွက်လာတော့ တရုတ်စံတော်ချိန် မနက် ၁နာရီခွဲခါနီးပေါ့။ လေယာဉ်ထဲဝင်ဖို့(တက်ဖို့) သွားတော့ လေယာဉ်မှူးကြီးတွေက လေယာဉ်ခေါင်းခန်းထဲကနေ လက်ရမ်းပြကြတယ်။ သူတို့လည်း ကိုယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သား မောင်နမတွေကို လာခေါ်ရတာ ပျော်နေကြတာနေမှာ။ ကိုယ်တွေလည်း လက်ပြန်ရမ်းပြရတာ ကိုယ့်မိဘက လာကြိုလို့ ပျော်ရသလိုမျိုးပဲ။ ပျော်တယ်ဆိုတာလေ။ အပျော်ဆုံးပဲ။ အပေါ့ပါးဆုံးခြေလှမ်းတွေနဲ့ လေယာဉ်ပေါ်တက်ရတာ အရသာရှိလိုက်တာ။
မနက် လေးနာရီ ငါးမိနစ်မှာ မန္တလေးလေဆိပ်ကို ဆိုက်တယ်။ ကန်တော်နဒီဆေးရုံသွားဖို့ သက်ဆိုင်ရာ ကားတွေပေါ်တက်ပြီးထွက်လာတော့ ငါးနာရီထိုးခါနီးပြီ။ ဆေးရုံကို ၆နာရီကျော်မှာရောက်ပြီး ဆေးရုံအဆောင်ထဲမဝင်ခင် အပူချိန်စစ်တယ်။အခန်းထဲရောက်တော့ တွေ့ပြီ။ ‌စေတနာတွေ။ အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံသား‌တွေပေါ်ထားတဲ့စေတနာတွေ။ ပြည်သူတွေရဲ့ကမ်းတဲ့လက်တွေ။ အို ထိတယ်။ အရှိုက်ကို ထိတယ်။ မျက်ရည်တောင်ဝဲရပါတယ် မြန်မာပြည်ကြီးရယ်။
ဘာတွေတွေ့လည်းသိလား။ ကုတင်ပေါ်မှာ အသင့်ခင်းထားတဲ့ အိပ်ယာ၊ ‌စောင်အထူ၊ တဘက်၂ထည်၊ စားစရာအစုံ။ ပန်းကန်ဇွန်း၊ဓာတ်ဘူး၊ရေသန့်။ပေါ်ကာရီစွက်အချိုရည် အစုံအစုံ……ပါပဲ။ လိုအပ်တာတွေကို မိုက်နဲ့ လမ်းညွှန်ပြီး မနက်စာကို နန်းကြီးသုပ်ကျွေးပါတယ်။ အိုး အပျော်ဆုံးပဲ။ နန်ကြီးသုပ်စားရလို့။ရေးရရင် ကုန်နိုင်ဖွယ်မရှိပါ။ လာရောက်ခေါ်ယူပေးပါ‌သော နိုင်ငံတော်ပိုင်Myanmar National Airlinesနှင့်volunteer များ၊ အစစအရာရာပံ့ပိုးပေးကြပါသော နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၊ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသော အကြီးအကဲများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ဖေ့စဘွတ်မှဖြစ်စေ messenger မှဖြစ်စေ, phone မှ ဖြစ်‌စေ ဆုတောင်းပေး၊ ကူညီပေးကြသူများအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရအောင် ကူညီပေးသော MPT ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စကားမစပ် mpt ဖုန်းနံပါတ်လေး‌တွေကလည်းလှတယ်။ အပူး‌လေးတွေ။ (အခုတောင် mpt wifi free နဲ့ ပို့စ်တင်နေတာ)
ချစ်ရပါတယ် မြန်မာပြည်ကြီးရယ်။ I am really proud of being Myanmar. Aye Myat Thu
အခွနေတှေကေတော့ အားလုံးသိပွီးကွမှာပါ။ အစကနေ မပွောတော့ပါဘူး။ အခု ခံစားခကျြကိုပွောရရငျ ဟိုကိုပွနျမသှားခငျြတော့ဘူး။ တက်ကသိုလျတှတေကျတုနျးက ကြောငျးပိတျလို့ အိမျပွနျရငျ ကြောငျးမပွနျသှားခငျြတာမြိုးပေါ့။
အစက ဖွဈခါစက ခြောကျခြားခဲ့တယျ။ တုနျလှုပျခဲ့တယျ။ သမှောကွောကျလို့မဟုတျဘူး။ အဲ သမှောကွောကျလို့ဆိုဦးတော့… မီဒီယာထကျက စကားလုံးတှေ၊ပို့ဈတှေ(မမှနျပမေယျ့)က အဖျောမဲ့စခေဲ့တယျ။ နာကငျြစခေဲ့တယျ။ တကယျတော့ ကိုယျက ဖေးမမှုကိုမြှျောလငျ့ခဲ့တာ။ စာနာမှုကို တောငျ့တခဲ့တာ။
လယောဉျ‌ကိုလညျး safe ဖွဈအောငျ သတျမှတျနရောမှာ ထိုငျရပွီး ကနျြထိုငျခုံမြားကို ခုံတှဖွေုတျထားပွီး ပလကျစတဈအုပျပွီး ကွိုးခညျြထားတယျ။ အိမျသာကိုလညျး သတျမှတျအိမျသာမှာသာ သုံးဖို့ လမျးညှနျထားတယျ။ volunteerတှလေညျး ဝတျစုံအပွညျ့နဲ့။
မနကျ လေးနာရီ ငါးမိနဈမှာ မန်တလေးလဆေိပျကို ဆိုကျတယျ။ ကနျတျောနဒီဆေးရုံသှားဖို့ သကျဆိုငျရာ ကားတှပေျေါတကျပွီးထှကျလာတော့ ငါးနာရီထိုးခါနီးပွီ။ ဆေးရုံကို ၆နာရီကြျောမှာရောကျပွီး ဆေးရုံအဆောငျထဲမဝငျခငျ အပူခြိနျစဈတယျ။အခနျးထဲရောကျတော့ တှပွေီ့။ ‌စတေနာတှေ။ အစိုးရရဲ့ နိုငျငံသား‌တှပေျေါထားတဲ့စတေနာတှေ။ ပွညျသူတှရေဲ့ကမျးတဲ့လကျတှေ။ အို ထိတယျ။ အရှိုကျကို ထိတယျ။ မကျြရညျတောငျဝဲရပါတယျ မွနျမာပွညျကွီးရယျ။
ဘာတှတှေလေ့ညျးသိလား။ ကုတငျပျေါမှာ အသငျ့ခငျးထားတဲ့ အိပျယာ၊ ‌စောငျအထူ၊ တဘကျ၂ထညျ၊ စားစရာအစုံ။ ပနျးကနျဇှနျး၊ဓာတျဘူး၊ရသေနျ့။ပျေါကာရီစှကျအခြိုရညျ အစုံအစုံ……ပါပဲ။ လိုအပျတာတှကေို မိုကျနဲ့ လမျးညှနျပွီး မနကျစာကို နနျးကွီးသုပျကြှေးပါတယျ။ အိုး အပြျောဆုံးပဲ။ နနျကွီးသုပျစားရလို့။ရေးရရငျ ကုနျနိုငျဖှယျမရှိပါ။ လာရောကျချေါယူပေးပါ‌သော နိုငျငံတျောပိုငျMyanmar National Airlinesနှငျ့volunteer မြား၊ အစစအရာရာပံ့ပိုးပေးကွပါသော နိုငျငံသူနိုငျငံသားမြား၊ စီစဉျဆောငျရှကျပေးပါသော အကွီးအကဲမြားအားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျရှငျ။
ဖစေ့ဘှတျမှဖွဈစေ messenger မှဖွဈစေ, phone မှ ဖွဈ‌စေ ဆုတောငျးပေး၊ ကူညီပေးကွသူမြားအားလုံးကိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ကြေးဇူးတငျထိုကျသူအားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျရှငျ။ပွနျရောကျရောကျခငျြး မိသားစုနဲ့ဆကျသှယျလို့ရအောငျ ကူညီပေးသော MPT ကိုလညျးကြေးဇူးတငျပါတယျ။ စကားမစပျ mpt ဖုနျးနံပါတျလေး‌တှကေလညျးလှတယျ။ အပူး‌လေးတှေ။ (အခုတောငျ mpt wifi free နဲ့ ပို့ဈတငျနတော)
ခဈြရပါတယျ မွနျမာပွညျကွီးရယျ။ I am really proud of being Myanmar. Aye Myat Thu